Manazava ny fomba hanakana ny vohikala sasany amin'ny Google Search Results ny Semalt
Google dia manova ny algorithmika saika isan'andro ary ny fanovana tsirairay dia tsy tsara foana ho an'ny webmasters sy bilaogera. Misy fotoana izay hisamborana ny tranonkalanao noho ny politika Google vaovao. Ankoatra izany, mety ho voakitika ny valin'ny fikarohana sy ny fitadiavana manokana momba ny geo. Tsara ny manakatona vohikala maromaro avy amin'ny valin'ny fikarohana Google mba hahafahan'ireo pejin'ny tranonkala mora hita. Soa ihany fa misy fomba sasany hanakanana vohikala sasany amin'ny valin'ny fikarohana Google.
Ny sasany amin'izy ireo dia nodinihan'i Ivan Konovalov, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt Digital Services.
Mora ny manangana blôgista manokana ao amin'ny Google Chrome anao. Noho izany, tokony hametraka ny Google extension ianao. Raha vantany vao tafapetraka izy dia ho hitanao ny safidy hanakanana ireo tranonkala na URL izay manelingelina anao matetika ary manosika ny tranonao any amin'ny valin'ny fikarohana Google. Raha vantany vao voatsikera ny safidy Block, ireo tranonkala ireo dia hanjavona avy hatrany amin'ny valin'ny fikarohana Google. Tokony hotsaroanao fa ireo tranonkala ireo dia miseho ao amin'ny valin'ny Yahoo sy Bing, izay midika fa tsy afaka manakana azy ireo amin'ny fikarohana hafa fikarohana amin'ny fampiasana io fomba fiasa io.
2. Atsaharo ny mpampiantrano amin'izao fotoana avy amin'ny Google..fr:
Mora ny manakana ny mpampiantrano amin'izao fotoana avy amin'ny Google.com. Raha nisokatra ny sehatra Google Chrome, dia azonao atao ny manakana ny tranonkalan'ny mampiahiahy na olon-dehibe amin'ny fipihana ny bokotra BlockIt. Ary raha tsindrio amin'ny safidy Show, ireo tranonkala ihany no hiverina amin'ny valin'ny fikarohana Google.
Raha te hahita ny lisitr'ireo tranonkala nosakanana vao haingana ianao, dia mila tsindrio fotsiny amin'ny sivana Blocklist ao amin'ny doka. Matetika izy io dia miseho amin'ny loko menamena ary manana menaka tanana
3. Ny tranonkala Webspam Report Google:
Ankoatra ireo fomba roa voalaza etsy ambony ireo, ny Plugins Webspam Report Google dia tsara koa ny miaraka. Izany dia ahafahanao mitatitra ireo tranonkala mampiahiahy sy olon-dehibe ho toy ny spam. Raha ny marina, ny safidy mora indrindra sy tsara indrindra dia azonao atao tatitra amin'ny tranonkala sy bilaogy amin'ny fotoana mety. Raha toa ka alefa amin'ny Google ny tatitra an-tsarimihetsika, ny motera fikarohana dia hamely sy hanakana ny tranonkala amin'ny valiny.
Amin'ity fanitarana ity, azonao atao ny manakana ny vokatra tsy fantatrao sy ahiahinao amin'ny mili-pikarohana Google. Mampalahelo fa ity plugin ity dia tsy miasa tsara amin'ny Safari sy ireo tranonkala hafa. Midika izany fa azonao ampiasaina izany raha tsy mijery ny tranokala ianao amin'ny Google Chrome ary manana io safidy io ho safidy voalohany.
Raha mpisera Firefox ianao, dia azo atao ny mametraka fanampim-panazavana hafa izay hanakana ireo tranonkala tsy fantatra amin'ny valin'ny fikarohana. Ohatra, raha manana tranonkala WordPress ianao dia afaka manamarina ny plugin iray izay manampy ny manakana ny tranonkala tsy fantatra amin'ny alàlan'ny valin'ny fikarohana Firefox. Rehefa tafapetraka tanteraka ianao, dia afaka manaisotra ilay plugin ary manakana na manafoana ireo tranonkala sy blôgy izay tsy tianao haseho amin'ny valin'ny fikarohana Google.
Ireo fomba rehetra ireo dia mora arahina sy mahomby amin'ny karazan-tranonkala rehetra, bilaogy, ary pejy media sosialy Source .